९ वर्षकी छोरीलाई के पो सिकाउने, अलमलमा परेँ
नेपाली पब्लिक मंगलबार, भदौ ३०, २०७७
पवन आचार्य सञ्चारकर्मी हुन् । लकडाउनको समयमा उनले छोरीसँग प्रशस्त समय बिताउने अवुसर पाए । लकडाउनमा छोरीसँगको समयलाई उनले यसरी सुनाए–
कोरोना महामारीको बीचमा लकडाउने गर्दा मेरो दैनिकी प्रभावित भयो । घरमा अर्को जिम्मेवारी आइलाग्यो, छोरीलाई पढाउने, सिकाउने ।
एक हप्तासम्म त रमाइलै गरी बित्यो । कहिले फूल गोडमेल गर्न सिकाएँ, कहिले चिया पकाउन त कहिले वासिङ मेशिनमा लुगा हाल्न र सुकाउन सिकाएँ । तर, दोस्रो हप्तापछि भने नयाँ कुरा सिकाउन मलाई नै गाह्रो हुन थाल्यो ।
९ वर्षकी छोरीलाई के पो सिकाउने ? अलमलमा परेँ । त्यसपछि मैले उनलाई कथाको किताब पढ्न लगाएँ । आफूसँग भएको किताब छिट्टै सकियो । बजार बन्द थियो, नयाँ किताब किन्ने सम्भावना पनि थिएन । त्यसपछि मैले अर्को जुक्ति निकालें ।
पुराना कथाहरु आफैले वाचन गरेर सुनाउने । यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । छोरीलाई कथा सुनाउँदै गर्दा मलाई के थाहा भयो भने बालबालिकाहरु आफैले पढ्नेभन्दा पनि अर्काले सुनाएको कुराहरु बडो चाखपूर्वक सुन्ने र मनमा गुन्ने रहेछन् ।
रेडियोमा काम गर्ने भएपनि म बोल्ने बेलामा अड्किन्छु, भकभकाउँछु । तर, छोरीलाई कथा सुनाउँदा आफ्नै लागि पनि अभ्यास भयो । पछि लामा कथाले छोरीलाई पट्यार लाग्यो कि भन्ठानेर मैले छोटाछोटा कथाहरु सुनाउन थालेँ । छोटा र सन्देशमुलक कथाहरु छोरीलाई साह्रै मन परेको जस्तो लाग्यो ।
अनि मेरो दिमागमा अर्को जुक्ति फुऱ्यो । हामीले पढ्ने बेलामा कक्षा ५ सम्म नीति कथाहरु पढाइन्थ्यो । तर, अचेल त्यो सुविधा बालबालिकाहरुबाट खोसिएको छ । समाजमा राम्रा र सकारात्मक ऊर्जा दिनेहरु कम र नकारात्मकता छर्नेहरु बढी छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि राम्रा र सकारात्मक भन्दा नकारात्मक र नराम्रा कुराहरु बढी शेयर हुन्छन् ।
यस्तोमा लकडाउनका बेला निस्किएको फुर्सदलाई सदुपयोग गर्नका लागि मैले युट्युब च्यानलमा नीति कथाहरु वाचन गरेर पोष्ट गर्न थालें । कथाहरु छान्नका लागि बाले घरमै निर्माण गर्नु भएको मिनी लाइब्रेरी काफी थियो । जहाँ अकबर वीरबलदेखि चाणक्यसम्म, लोककथाको सँगालोदेखि भागवत गीता र महाभारतसम्म उपलब्ध थियो ।
अहिले म मेरो च्यानलमा हरेक शनिबार बिहान नीति कथा र मंगलबार साहित्यिक कथाहरु वाचन गर्छु । छोरीको लागि पनि भयो अरुको छोराछोरीको लागि पनि । मेरो च्यानलको सुरुवात छोरीलाई कथा सुनाउने कामबाट प्रेरित भयो । यसले अरुलाई पनि थोरै भएपनि सकारात्मक ऊर्जा र सोचको विकास गराउँछ भन्ने लाग्छ ।
यसको मूल सामाग्री पढ्नुहोस्
इन्टरनेटको फास्ट ट्रयाकबीच नेपाली बालसाहित्य कता ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३०, २०७७ १८:१३
मंगलबार, मंसिर ९, २०७७ १९:२६ कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थित र सन्तोषजनक : शिक्षामन्त्री
मंगलबार, मंसिर ९, २०७७ १५:०८ बाबुको किरिया बसेका युवकले पनि दिए कक्षा १२ को परीक्षा
सोमबार, मंसिर ८, २०७७ १४:१८ भोलिबाट कक्षा १२ को परीक्षा, शिक्षामन्त्री भन्छन्,‘ढुक्क भएर परीक्षा दिनुस्’
बिहीबार, मंसिर ४, २०७७ १०:४० जिल्लाभरका शैक्षिक संस्था पुनः बन्द, अन्तरपालिका आवतजावतमा रोक
बिहीबार, कात्तिक २७, २०७७ १८:२५ मनिषा कोइरालाले शुरु गरिन् क्यान्सर एजुकेशन फन्ड
सपना सम्बन्धी राेचक तथ्यहरू
काश्मीरमा भएकाे आतंककारी हमलामा नेपाली युवकको मृत्यु
सानोकाजी तामाङको हत्यामा संलग्न एक अभियुक्त पक्राउ, श्रीमती अझै फरार
भारतमाथि अष्ट्रेलियाको शानदार जीत
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका विस्तार, २ सय ३९ सदस्यीय टिम बन्यो
वीपी, गणेशमान र किसुनजीका ‘सहयोद्धा’ प्रजातन्त्र सेनानी दिलबहादुर कामीको निधन
नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा पुन:उत्थानमा जोड
भूकम्पबाट क्षति पुगेका सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा पुन:निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सकिने